Dalxiiska Jamaica iyo Grupo Pinero: Wadahadallada Maalgelinta Dalxiiska Gaarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica iyo Grupo Pinero: Wadahadallada Maalgelinta Dalxiiska Gaarka ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica iyo Maamulka Sare ee Grupo Pinero
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (oo lagu arkay xarunta sawirka) ayaa hakiyay sawir uu la galay madaxda Grupo Piñero: CEO, Encarna Piñero (bidix); iyo Madaxweyne kuxigeenka, Tayada & Hal-abuurka, Lydia Piñero.
Munaasabadda ayaa ahayd kulan gaar ah oo dhexmaray Wasiir Bartlett, saraakiil sare oo ka tirsan Wasaaradda Dalxiiska iyo hay'addeeda guud, iyo kooxda maamulka fulinta ee Grupo Pinero.
Grupo Pinero waxa ay leedahay Bahia Principe Runaway Bay, oo ah hudheelka ugu weyn Jamaica oo leh 1,375 qol.
Safiirka Spain u fadhiya Jamaica, Mudane Diego Bermejo Romero de Terreros, ayaa isna goobjoog ka ahaa.
Grupo Pinero ayaa leh oo ka shaqeeya 27 goob dalxiis oo caalami ah oo leh in ka badan 14,000 qol. Shirkadu waa oo ku saabsan Jamaica, iyadoo la qorsheynayo in la ballaariyo.
The Jamaica Wasaaradda Dalxiiska Hay'adaheeda ayaa hadaf u ah kor u qaadida iyo badalida wax soo saarka dalxiiska Jamaica, iyadoo hubinaysa in faa iidooyinka ka imanaya waaxda dalxiiska loo kordhiyo dhamaan Jamaica. Si taas loo gaaro waxay hirgelisay siyaasado iyo istiraatiijiyado siin doona dardar dheeraad ah dalxiiska oo ah mashiinka koritaanka dhaqaalaha Jamaica. Wasaaraddu waxay weli u heellan tahay inay hubiso in waaxda dalxiisku ay gacan buuxda ka geysato horumarinta dhaqaalaha Jamaica iyada oo la siinayo wax soo saar badan.
Wasaarad ahaan, waxay hogaaminayaan howsha si loo xoojiyo isku xirnaanta dalxiiska iyo qeybaha kale sida beeraha, waxsoosaarka, iyo madadaalada. iyo kaladuwanaanshaha waaxda si loo kobciyo kobcinta iyo shaqo abuurka dadka reer Jamaica ah. Wasaaraddu waxay u aragtaa mid muhiim u ah jiritaanka iyo guusha Jamaica waxayna ku qaadatay geeddi-socodkan hab loo dhan yahay, oo ay wadeyso Dalxiisyada Dalxiiska, iyada oo loo marayo wadatashi ballaadhan.
Qaybta Isgaadhsiinta Shirkadaha
64 Boondheere Knutsford
Agaasimaha Sare, Isgaarsiinta Shirkadaha